DU’UU ‘MOO JIRAACHUU NUUF WAYYA?-Bahru D. Bayisaa – Beekan Guluma Erena
DU’UU ‘MOO JIRAACHUU NUUF WAYYA?-Bahru D. Bayisaa	Beekan Erena
Education December 19, 2016Oromo Revolution
30SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
DU’UU ‘MOO JIRAACHUU NUUF WAYYA?-Bahru D. Bayisaa
Miir–waloon(common sense) akka nuuf mirkkanneessutti du’uu irra jiraachuutu caala. “Jiraachuun ni caala.” jedhu miti warri keenya yeroo nagaa wal gaafatan. Namni yeroo itti tolus ta’e yeroo rakkatu fedhii jiraachuu gudunfatee deema.
Akka salphaatti abdii hin kutatu. Akaayii nyaatee, bishaan raafuu dhugee bulee guyyaa biraa fi haala foyya’aa abdiin eeggata. Seera malee hidhamee, mana hidhaa keessa ciisee guyyaa haqni isaa itti deebi’uuf herregata. Dhukkuba daranyoon (cancer) utuu yelaluu waa’ee fayyuu herrega— du’atti harka hin kennu tasa.
Xinxaltotni qor-qalbii damee psychoanalysis jedhamu jala jiran hedduun garuu waa’ee fedhii jiraachuu (eros) fi fedhii du’uu (Thantos) mucaa namaa akka gaariitti xinxalanii miir-waloon keenya yeroo baayyee dhugaa haguuguu akka danda’u ibsanii jiru. Waan dhugaa fakkaatu marti dhugaa miti jechuu fakkaata.
Mucaan namaa fedhii jiraachuu qofa utuu hin ta’in fedhii du’uu illee akka qabu ibsu. Fedhiin du’uu garuu akka fedhii jiraachuu mul’inatti namatti beekamuu dhiisuu mala. Miir-sammuu dhokataa (unconscious motivation) keessaa waan burquuf namatti hin beekamu. Bakka dhokata taa’ee hojii bakka fi yeroo hundatti mul’atu (darbee darbees kan hin mul’anne) hojjeta.
Kanaafuu, namni duuti akka jiru utuu beekuu fedhii ofiin lola hamaa keessa seena. Hojii ofii fedhii ofiin gadi dhiisee karaa irra qorra keessa jiraachuu filata. Tamboo fi qoricha miira fi sammuu isaa laamsheessan fudhachuun of dhukkufachiisa. Utuu balaa isaa arguu sanyoo isaa/ishee waliin sagal-gala. Nagaa fi jaalalaan jiraachuu dhiisee jibbaa fi wal hammeessuu filata. Walumaa galatti utuu arguu akka fuutuu ibiddatti gama jedhu… hayyotni dhimma kana qoratani.
Akka Sigmund Freud ibsutti (1920),”Thanatos is associated with negative emotions such as fear, hate and anger, which lead to anti-social acts from bullying to murder (perhaps as projection of the death drive).”
Tarii, eeyyee tarii, namni keenya hedduun utuu hin beekin jiraachuu irra du’a filate imoo maaliif karaa jaalala fi karaa waliin jiraachuu dhiisee karaa wal diiguu fi wal loluu calchifata laata? Namni Oromoo ta’ee guyyaa saafaan diina waliin hiriree Oromummaa irratti waraana banu fedhii du’uu hin qabu naan jettuu?
Du’a ‘moo jiraachuu nuuf wayya? Mee maal jettu? Dammaqina qor-qlbii horachuudhaan yaada keenya isa dhokata to’achuudhaan matayaa fi saba keenya du’aa fi badisa jalaa baraaruun dirqama natti fakkaata.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa30SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DIINQA AFAAN OROMOO Kutaa 2ffaa-Beekan Gulummaa Irranaafi Caalaa Haahiluu Abaataa
Dhiigni saba keenyaa dhangalahee hin hafu! Baarentuu Gadaa Irraa →